जानकारी Archives - ताजा समाचार
Oct132019 by ताजा समाचारNo Comments
घर किन्न वा बनाउनको लागि कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ ? (हेर्नुस् बैंकमा आबश्यक पर्ने डकुमेन्टहरु)
Posted in अर्थ, जानकारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित मापदण्डभित्र रहेर घरजग्गा गरिद तथा निर्माणका लागि कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछन् । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगत प्रयोजनको घरजग्गा खरिद तथा निर्माणका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार उपत्यकाभित्र घर कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सम्पत्तिको मूल्यांकनमा मार्केट भ्यालुको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । कर्जा तिर्ने आधार राम्रो भए प्रिमियम ब्याजदरमा मोलमोलाई गर्न सकिन्छ भने सेवा शुल्कमा पनि मोलमोलाई गरेर खर्च घटाउन समेत सकिन्छ । कर्जा प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजातहरु बैंक मार्फत कर्जा लिनका लागि ग्राहकले आफ्नो अचल सम्पत्ति धितोबन्धक राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानत बस्नेको नियमित आम्दानीको श्रोत हुन जरुरी छ भने एक बर्
के हो डेबिट र क्रेडिट कार्ड ? भिन्नता के के छन्, ग्राहकलाई कुन फाइदा ?
पछिल्लो समय नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग अत्याधिक रुपमा गरेको छ । डेबिट कार्डको प्रयोग धेरै भएको छ भने क्रेडिट कार्डको प्रयोग पनि क्रमश बढदै आएको छ । तर आम मानिसहरु डेबिट र क्रेडिट कार्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझाइ कम भएको पाइएको छ । आज हामी तपाइहरुलाई यी दुवै कार्डको बारेमा भिन्नता र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विधिबारे जानकारी दिन गइरेका छौं । डेबिट कार्ड: डेबिट कार्ड भनेको प्लाष्टिक पेमेन्ट कार्ड हो, जसले बैंकको खाताबाललाई आफ्नो खातामा इलेक्ट्रोनिक पहुँच उपलब्ध गराउँदछ । उक्त कार्डबाट खाताबालले आफ्नो खातामा भएको रकमबाट रकम निकाल्ने तथा खरिदमा भुक्तानी गर्न सक्दछ । अहिले बिभिन्न देशहरूमा यस्तो कार्डको प्रयोग बढ्दो रुपमा छ, जसले चेकको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन समेत गरेको पाईन्छ । यसको प्रयोग गरेर एटिएम (अटोमेटेड टेलर मेसिन) बाट नगद निकाल्न
Oct32019 by ताजा समाचारNo Comments
बेलायतबाट फर्किदा भारतमा जङ्ग बहादुरलाई हेर्न ३ लाख मान्छे, नेपालको शिर उच्च राख्ने दुर्लभ भिडियो
श्री ३ महाराज जङ्ग बहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाने कुरा भयो , उन्ले सोधे "मलाई कती तोपको सलामी दिनुहुन्छ ?” उताका दुतले भने, “भारतका कार्यकारीणी/राजाहरु जाँदा ६-७ तोपको सलामी दिने चलन छ, हजुरलाई पनि त्यति नै दिन्छौँ । ” जङ्ग बहादुर कड्किए, म एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको कार्यकारी हुँ, तिम्रो उपनिवेशको एउटा पुतली प्रमुख होइन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको कार्यकारी सरह सलामी नदिने भए म बेलायत जान्न । पछी बेलायतले उन्लाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा राजकिय सम्मान दियो । यात्रा कै क्रममा उन्लाई बेलायत सरकारले १७ लाख पाउण्ड अनुदान दिन खोज्दा उनले “हामी सनातन धर्म मान्ने नेपाली , लिने हैन दिने जात हो” भनेर अनुदान लिन मानेनन । बेलायतबाट फर्किदा भारतमा जङ्ग बहादुरलाई हेर्न ३ लाख मान्छे जम्मा भएका थिए रे । यो हो हाम्रो गौरवसा
कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो ? थाहा पाउनुहोस्
मानिस एकै महिनामा जन्मिन्छ भन्ने छैन। १२ महिना मध्ये जुन महिनमा पनि जन्मिएको हुन सक्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव फरक पाइने गरेको छ। कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ त। यस्ता छन् फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव: बैसाख यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ । जेष्ठ जेष्ठ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त हुन्छ । यी महिलाहरूका लागि जीवनमा आइपर्ने कुनैपनि कार्यहरूमा समस्या हुँदैन् । यी महिलाहरू तिर्थधर्म गर्नेमा अगाडी हुन्छन् । आषाढ आषढमा जन्मिएका म
Sep302019 by ताजा समाचारNo Comments
बिहेपछि महिलाको हिप बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण ! जुन सुनेपछी तपाई … पूरा पढ्नुहोस 👇👇
काठमाडौ । प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र स्तनको आकारमा धेरै परीवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हिप र चेस्टको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ । तर अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् । सोधकर्ताका हरुको अनुसार जुन महिलाले एक दिनमा पटक पटक यौन सम्बन्ध राखेका थिए उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा अलिकति बढी भएको पाएका थिए । साथै हिपको आकार ठुलो भएका महिलाहरुलाई गर्भवती हुदा खासै समस्या
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी
जमिनको कारोबार गर्दा त्यसको क्षेत्रफल मापन अनिवार्य हुन्छ । वर्गफिट वा वर्गमिटर जग्गा मापनको सर्वमान्य इकाई हो । तर स्थानपिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ । तराईमा क्रमशः कुनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा दाम, पैसा, आना र रोपनी जग्गा मापन गरिने आधारभूत इकाईको रूपमा चलिआएका छन् । यी इकाईलाई तल दिइएको तालिकाका आधारमा विश्वव्यापी सर्वमान्य इकाई (वर्गफिट वा वर्गमिटर) सँग रूपान्तरण गरेर जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफल कति हुन्छ वा कसरी नापिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बिघा 1 Bigha (बिघा) = 20 Kattha (कठ्ठा) 1 Bigha (बिघा) = 6772.63 m² 1 Bigha (बिघा) = 72900 sq.ft. 1 Bigha (बिघा) = 13.31 Ropani कठ्ठा 1 Katha (कठ्ठा) = 20 Dhur (धुर) 1
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई घरमा लक्ष्मीको दर्जा दिईने गर्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने भएकाले पनि उनीहरुलाई यस्तो दर्जा दिने गरिएको हो। कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गर्ने गरिएमा लक्ष्मीको श्राप मिल्ने र दुख कष्टको साथै आर्थिक संकटले घेर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रको अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो गर्छ भने त्यसले धेरै कुरा संकेत गरिरहेको हुन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई कुन-कुन अंग ठूलो भएका महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन भन्ने विषयमा जानकारी गराउन जाँदै छौँ। १. घाँटी : शास्त्रका अनुसार लामो घाँटी भएका महिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान -प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्ने छ। २. कान : शरिरका दुई वटै कान ठूलो भएका महिलाहरु लामो आयुको हुने र निकै भाग्यमानी हुने गर्छन। ३. कपाल : ज्योतिष शा
काठमाडौँ । बाथरुममा निलो रङ्गको बाल्टी राख्नु निकै लाभदायी हुन्छ। निलो रङ्गको बाल्टी बाथरुपमा राख्नाले सुख शान्ति, तथा संवृद्धिमा वृद्धि हुने विस्वास रहँदै आएको छ। तर बाल्टी भने कहिल्यै पनि खाली राख्नु हुँदैन। यसलाई सँधै भरी बनाएर राख्नुपर्छ । घरको बाथरुम देख्दा सामान्य लाग्छ तर यसमा पनि कैयौँ दोषहरु उत्पन्न हुन्छन् । जसले जीवनमा शुभ अशुभ फल दिन्छ । तपाईले यसमा ध्यान दिनुभएन भने गलत वास्तुको प्रभावले जीवनमा दुख परिरहन्छ । बाथरुम घरको एक अनिवार्य क्षेत्र हो । यस स्थानको सम्बन्ध तपाईको धन लाभसँग पनि जोडिएको हुन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार बाथरुममा निलो रङ्को बाल्टी राख्नु निकै लाभदायी मानिन्छ । यसरी राख्नाले सुख शान्ति र सम्वृद्धि मिल्नेछ। वास्तु अनुसार बाथरुमको ढोका अगाडि ऐना राख्नु अशुभ मानिन्छ। जब तपाई बाथरुमको ढोका खोल्नुहुन्छ भने नकारात्मक उर्जा ऐनामा देखिनेछ र घरमा पनि त्यस्तै प्
यी हुन श्रीमानको अगाडि गर्न नहुने २० कुराहरु
एजेन्सी : श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो एक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको निष्कर्षमा उल्लेख भएका श्रीमानका अगाडि श्रीमतीले गर्नु नहुने २० बुँदा : १. श्रीमानसँग ठूलो आवाजमा कहिल्यै नबोल्नु । २. श्रीमानको कमजोरी परिवार र साथीको अगाडि नखोल्नु । ३. आफ्नो मुड अनुसार कहिल्यै कुरा नगर्नु । ४. अरु पुरुषसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु । ५. श्रीमानको साथीको बारेमा कहिल्यै नराम्रो नबोल्नु । ६. उसले तिमीसँग विहे गरेको भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सनु । ७. कहिल्यै पनि अरुलाई तिम्रो श्रीमानको ख्यान गर्नु नभन्नु । ८. कुनैदिन श्रीमान खाली हा
Sep292019 by ताजा समाचारNo Comments
भारतले नेपाल पठाउने प्याज रोकेपछि दशैंको मासु विनाप्याज पकाउनुपर्ने बाध्यता
काठमाडौँ । भारतमा प्याजको मूल्य अत्याधिक बढेपछि त्यहाँको सरकारले आइतबार देखी प्याजको निकासीमा पूर्णतया बन्देज लगाएको छ । भारत सरकारको केन्द्रिय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयले यस्तो घोषणा गरेसँगै नेपालमा त्यसको प्रतक्ष्य प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपालीहरुको प्रमुख चाड बडा दशैँको पूर्वसन्ध्यामा प्याजको अभावले ठुलै समस्या उत्पन्न गराउने देखिएको छ । दसैमा मासुको उपयोग बढी हुनेहुँदा त्यो समयमा मसलाको रुपमा प्याजको समेत खपत बढ्ने गर्छ । भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा प्याजको अभाव हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निकासीमा प्रतिवन्ध लगाईरहँदा नेपालको आपूर्ति मन्त्रालयले कहाँबाट कसरी प्याजको आपूर्ति गर्ने भन्नेबारे सोचेको चाहीं देखिएको छैन । नेपालमा भारतबाट नै प्याज आउने भएको कारण चीनबाट धेरै प्याज ल्याईदैन । अब यदी चीनबाट प्याजको आपूर्ति गर्ने कदम चाल्ने हो भनेपनि दसैँअघि त्यो
मन्त्रिमन्डल पुनर्गठन हुँदै : कम्तिमा पनि ६ जना मन्त्री फेरिने ? यी हुने बर्खास्तमा पर्ने सम्भावित मन्त्रीहरु
आहा ! जाने हैन त घुम्न बन्दीपुर ! हेर्नुहोस केही मनमोहक तस्विरहरु
अमेरिकामा कार दुर्घटना : दुई नेपालीको युवतीको नि धन, एक गम्भीर घाइते
सि जिङपिङ फर्किएकै रात प्रचण्डले गरे खतरनाक घोषणा, ओलीलाई तनाव !
तीन छोरी जन्माएकी आमा र शिशुको ओली सरकारले हेलीकोप्टरबाट गर्यो उद्धार
नेभिगेसन मेनु ।
Story अर्थ कला-मनोरञ्जन खेलकुद जानकारी धर्म पर्यटन बिज्ञान प्रबिधि ब्यानर न्यूज ब्लग भिडियो राजनीति राशिफल रोचक समाचार समाज स्वास्थ्य